Bogga ugu weyn 12 Software Xisaabinta Ganacsiga Yaryar ee ugu Fiican Sanadka 2022
Dhowr iyo toban sano ka hor, macaamil xisaabeed ayaa gacanta lagu duubay, habkani wuxuu soo bandhigay waxyaalo badan oo khasaare ah sida qaladka aadanaha, marin habaabinta dukumiintiyada muhiimka ah, kaydinta liidata, wax isdaba marin, iyo inta badan dukumiintiyada qarsoodiga ah waxay ku dhici karaan gacmo qaldan.
Markii ay soo ifbaxday tiknoolijiyadda ayaa waxaa soo baxay softiweerka Xisaabinta kala duwan, kaas oo aan ka dhigin kaliya macaamil maaliyadeed mid sahlan oo sax ah laakiin sidoo kale beddelay fikraddii xisaabaadka oo dhan.
Software -ka xisaabinta ganacsiga yaryar wuxuu ka caawiyaa milkiilayaasha meheradda diiwaangelinta iyo falanqaynta macaamil maaliyadeed si hufan, wax ku ool ah, oo sax ah. Softiweerka xisaabinta ee hadda jira wuxuu leeyahay astaamo aad u ballaaran oo u abuuray siyaabo saxnaanta xisaabinta sare.
Akhrintan, waxaad ku baran doontaa wax badan oo ku saabsan software-ka xisaabaadka. Jadwalka sare ayaa ku hagaya.
Waa maxay is Accounting Software?
Software -ka Xisaabintu waa barnaamij kombiyuutar oo ka caawiya xisaabiyeyaasha iyo xisaabiyeyaasha duubista iyo ka warbixinta macaamil maaliyadeed shirkad ama ganacsi. Waxay qiimeysaa oo daryeeshaa xaaladda maaliyadeed ee shirkad.
Milkiilayaasha meheradda iyo xirfadleyda xisaabaadka ayaa adeegsada softiweerka xisaabinta si ay u socodsiiyaan, u qoraan, una falanqeeyaan macaamil xisaabeedka. Waxay bixisaa xog sax ah, dhoofinta xogta, amniga, qanacsanaanta koontada waxayna sidoo kale ka caawisaa abuurista warbixinta.
Waxaa loo adeegsadaa diiwaangelinta dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee guud sida xisaabaadka la bixin karo iyo rasiidhada, dib -u -heshiisiinta bangiga, alaabada, qaansheegyada, miisaaniyadda, iwm. Waa aalad lagama maarmaan u ah falanqaynta awoodda maaliyadeed ee shirkad. Waxa kale oo ay kaa caawineysaa in aad la socotid soo galitaanka iyo ka bixidda macaamilka lacagta caddaanka ah.
maxaad do Small Ganacsi u baahan Accounting Software?
Ganacsiyada yaryar waxay u baahan yihiin softiweer xisaabinta diyaarinta habaysan oo abaabulan ee bayaannada maaliyadeed. Waxay kaa caawineysaa la socodka macaamil maalmeedka ganacsigaaga.
Waxaa laga yaabaa inaad dareento inaadan u baahnayn softiweer xisaabeed maadaama aad maamusho ganacsi yar laakiin haysashada softiweerka xisaabinta ayaa kuu samayn doona wax badan oo wanaagsan.
Waa kuwan dhowr sababood oo ay ganacsiyada yaryar ugu baahan yihiin softiweerka xisaabinta:
Software -ka Xisaabaadka wuxuu dammaanad qaadayaa xawaaraha wuxuuna dhimayaa waqtiga lagu kharash gareeyay duubista macaamilkaaga gacanta. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad geliso tirooyinka saxda ah oo natiijooyinka si otomaatig ah ayaa loo soo saari doonaa.
Dad ahaan, maahan wax aan caadi ahayn in khaladaad la sameeyo marka gacanta lagu xisaabinayo, iyo khalad yar oo ku jira macaamilka maaliyadeed ee ganacsigaaga ayaa saamayn taban ku yeelan kara meheraddaada, softiweerka xisaabintu wuxuu kaa caawinayaa inaad ka takhalusto khaladaadka xisaabinta.
3. Abaabulay dhaqaale Warbixin
Ganacsiyada yaryar waxay u baahan yihiin softiweer xisaabeed si loo helo warbixin maaliyadeed oo habaysan oo habaysan. Waxay kaa caawineysaa inaad duubto macaamilkaaga maalinlaha ah si habsami leh si aad u hesho faham cad, waxay kaloo dammaanad qaadeysaa amniga, ka sokow, helitaanka macluumaadka muhiimka ah ee meheraddaada gacmo qaldan waxay yeelan kartaa saameyn ba'an.
4. Dhimista in qiimaha
Waxay yaraynaysaa kharashka ku lug leh shaqaalaynta adeegyada xirfadlaha xisaabaadka iyo kharashka la xidhiidha dayactirka nidaamka xisaabinta gacanta.
5. Kaydiya waqtiga
Ganacsiyada yaryar waxay u baahan yihiin softiweer xisaabeed si ay u badbaadiyaan waqtiga la xiriira diiwaangelinta macaamil maaliyadeed gacanta,
Canshuurtu aad bay muhiim ugu tahay sii wadista meheraddaada, si xisaabinta saxda ah ee canshuurahaaga sanadlaha ah, waxaad u baahan doontaa warbixin maaliyadeed oo faahfaahsan, softiweerka xisaabinta ayaa kuu diyaariya warbixinnadaas iyo warbixin otomaatig ah oo sax ah, waxaad si guul leh u maareyn kartaa arrimaha canshuurtaada.
Akhri: 10 Software Maareynta Document -ka ugu Fiican 2022 -ka
Hoos waxaa ku qoran liiska 12ka Software -ka Xisaabaadka ugu fiican sannadka 2022, oo leh macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan mid kasta, oo ay ku jiraan faa'iidooyinka iyo khasaaraha.
Intuit QuickBooks khadka tooska ah
Sage 50 daruur
XIDHIIDHKA: 15ka dawo ee ugu Wacan ee Calool istaagga guriga 2022
Kani waa softiweer xisaabeed ay soo saartay Intuit. Waxay adeegsadaan ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxayna bixiyaan codsiyada xisaabaadka goobta iyo sidoo kale qaababka daruuriga ku salaysan ee aqbala bixinta ganacsiga, bixiya shaqooyinka mushaharka, maamula oo bixiya biilasha.
Waxay la timid aalad dhammaystiran oo loogu talagalay xisaabinta, alaabada, xereynta canshuurta, qaansheegashada, dib -u -heshiisiinta bangiga iyo raadraaca, maareynta kharashyada, miisaaniyadda, iyo waxyaabo badan oo la yaab leh oo ku saabsan ganacsigaaga.
Intuit waa mid ka mid ah barnaamijyada xisaabinta ganacsiga yaryar ee ugu fiican. Waxay kaloo bixisaa tababar iyo taageero onlayn ah markaad u baahato.
Intaa waxaa dheer,waxay leedahay waqti tijaabo oo bilaash ah iyo nidaamka qiimeynta waxaa ka mid ah, bilow fudud $ 25/bishii, Muhiimadda $ 40/bishii, Waxaa lagu daray $ 70/bishii, iyo Sare $ 150/bishii.
Faa'iidooyinka Intuit QuickBooks Online
Badeecada la qiyaasi karo
Interface waa u fududahay in la maraan
Kaydinta otomaatiga ah
Daruur ku saleysan
Dhexgalka barnaamijyada saddexaad
Helitaanka xogta ee isku mar
Ogolaanshaha Intuit QuickBooks Online
Fayl kasta oo ganacsi wuxuu u baahan yahay rukhsad gaar ah
Wuxuu u baahan yahay casriyeyn joogto ah
Raadinta alaabada adag
Booqo xiriirinta hoose si aad u hesho barnaamijkan ganacsigaaga.
Wave waa softiweer xisaabeed oo lacag la’aan ah, oo aan lahayn wax xaddidan qaansheegasho, xiriiro, alaab iyo astaamo kale, laakiin waa inaad bixisaa khidmad si aad u hesho mushaharka, ka shaqaynta lacag bixinta, ama xisaabinta xirfadeed.
Waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahida milkiilayaasha meheradaha yaryar, aqoon kasta oo ay u leeyihiin xisaabaadka.
Sida software daruur ku salaysan, si fudud ayaad ula jaan qaadi kartaa koontadaada bangiga. Waxay ahayd tii ugu horreysay ee bixisa astaamo hoggaamineed oo isku dhafan, kuma dari kartid isticmaaleyaal badan, taasoo ka dhigaysa mid aan ku habboonayn ganacsiyada waaweyn.
Habyaalada qaansheegta soo jiidashada leh
Aan ku habboonayn shirkadaha waaweyn
Abka mobilada ee xadidan
Ma jiraan sifooyin maareyn mashruuc
Raad -raac iyo tirinta waqti xaddidan.
Freshbook waa daruur qaansheegad ku salaysan oo ku salaysan qaansheegasho iyo softiweer xisaabeed oo loogu talagalay xirfadlayaasha iskood u shaqeysta iyo ganacsiyada yaryar.
Waxay leedahay astaamo faahfaahsan oo ay ka mid yihiin, aqbalaadda lacag -bixinta internetka, raadraaca waqtiga, iskaashiga, otomaatiga, iyo aaladaha kale ee aad u baahan karto.
Sidoo kale waa softiweer ku saleysan daruuriga kaas oo si aad ah loo heli karo, laakiin aamin ku filan si loo waafajiyo iyo is -dhexgalka bangiyada, shirkadaha kaararka deynta, xarumaha lacag -bixinta iwm Qiimeynta waxay ka bilaabataa $ 15/ bishii.
Raadinta qaansheegta waqtiga dhabta ah
Qorshaha qiimaha la awoodi karo oo dabacsan
Taageerada daruuraha Taageero madal badan
Ma jiro maareynta alaabada
Ma jiraan adeegyo mushahar
Kaalmo lacageed oo badan
Si sahal ah uma heli karaan shirkadaha waaweyn
Tani sidoo kale waa daruur ku saleysan softiweerka xisaabaadka ganacsiga yar -yar oo si otomaatig ah u shaqaynaya hawlaha kaydinta ee milkiilayaasha ganacsiga yaryar.
Waxay bixisaa warbixinno sax ah, dhammaystiran oo waqtiga dhabta ah hal guji, iyadoo la adeegsanayo barashada mashiinka, qaybaha softiweerka waxayna heshiisaa kharashaadka bangiga iyo kaarka deynta.
Qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa $ 19.95/bishii bil kasta ama $ 16.65/bishii ayaa la soo dallacaa sannad walba.
Taageerada isticmaala badan
Interface interface fiican
Qalabka xisaabinta fudud
Wuxuu la socdaa kharashyada iyo dakhliga
Waxay taageertaa dakhli badan
UI waxay u baahan tahay casriyeyn
Ma raaco liiska alaabada
Shaqada iimaylku waxay u baahan tahay hagaajin
Xero waa barnaamij xisaabeed daruur ku salaysan oo ay adeegsadaan ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, oo leh qalab lagu maareeyo qaansheegta, dib -u -heshiisiinta bangiga, alaabada, iibsashada, kharashyada iyo qaar kaloo badan. Waxay adeegsataa lacago badan, waxay kaloo kaa caawineysaa inaad ogaato xaaladdaada maaliyadeed.
XIDHIIDHKA: Immisa Aasaaska Dayactirka Texas?
Softiweerku wuxuu socon karaa in ka badan 50 warbixinood oo ay ku jiraan bayaannada faa'idada iyo khasaaraha iyo buug -yaraha guud, waad habayn kartaa warbixinnada, waxaad u arki kartaa kala -soocida taariikhda raadinta jaantusyada iwm. bixinta biilka, maareynta alaabada, dabagalka waqtiga. Qiimeyntu waxay ka bilaabataa $ 10 bishii
Bangiga otomaatiga ah ayaa quudiya
Nidaamka qiimaha fudud
Si fudud ayaa looga heli karaa aalad kasta oo leh xiriir internet
Ma taageerto badeecadaha sicirka sarrifka
Ma taageero shirkado waaweyn
Helitaanka xaddidan ee desktop -ka
6. Sage 50cood
Sage 50 waa nooc xisaabeed iyo wax -soo -saar mushahar oo ay soo saartay kooxda Sage oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Barashada aaladaha ku jira xikmadda ayaa kuu oggolaanaysa inaad si hufan oo macaash leh u maamusho ganacsigaaga.
Waa mid aad u dabacsan oo la habeyn karo. Waxaa kaliya loo adeegsan karaa khadka tooska ah iyada oo loo marayo daruuraha ama lagu rakibi karo server-kaaga sida goobta-dhismaha. Marka ganacsigaagu kobco waxaad kor u qaadi kartaa software -ka.
Qorshaha qiimeynta waxaa ka mid ah $ 56.08/bishii xisaabaadka pro, $ 84.58/bishii qiimaha iyo $ 139.58/bishii xisaabinta tirada.
Waxa kale oo ay leedahay qorshe kale oo ku kacaya $ 25/bishii adeegsadayaasha aan xadidnayn, iyada oo aad ku soo diri karto qaansheegad, xigashooyin iyo qiyaaso, socodsiiso warbixinno, falanqayn dhaqan si loo saadaaliyo socodka lacagta caddaanka ah.
Gelitaanka qaansheegta fudud
Ka -soo -galinta qoraallada Excel
Qoraalka maaliyadeed ee labadaba lacag caddaan ah iyo isugeyn
Si dhakhso ah u dhex mara interface
Jeegaga daabacaaddu waa sahlan tahay
Waxaa ka maqan xisaabinta kharashka
Qiimaha iibka macmiilka ee xaddidan
Ma jiro bakhaar badan
Kani waa software Qorsheynta Kheyraadka ee Shirkad loo isticmaalo maareynta alaabada, la socodka macaamilkaaga maaliyadeed, martigelinta dukaamada e-commerce, iyo ilaalinta nidaamka maareynta xiriirka macaamiisha.
Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada xisaabaadka ugu wanaagsan ee ganacsiyada yaryar, maadaama ay bixinayso sawir dhammaystiran oo ku saabsan macaamilkaaga ganacsi iyada oo sidoo kale si otomaatig ah u hagaajineysa dhinacyada xisaabaadka.
Waxaad maareyn kartaa dhammaan dhinacyada ganacsigaaga hal dashboard. Waxaad samayn kartaa oo heli kartaa lacag -bixin, maareyn kartaa canshuuraha, diri kartaa qaansheegta, haddii aad sidoo kale iibiso caalamka, software -kan ayaa si otomaatig ah u socodsiiya iibinta iyo lacag -bixinta iyadoo ku saleysan sharciyada maxalliga ah ee aad ka shaqeyneyso.
Warbixinnada la habeyn karo
Waxay qabataa qaybo ganacsi oo badan
Muuqashada xogta waqtiga-dhabta ah
Waxay taageertaa lacag badan
Qiimaha is -qoritaanku waa mid sarreeya
Lacag dheeraad ah oo loogu talagalay cutubyada horumarsan
Kani waa dhammaystirka xisaabinta ganacsiga yar yar iyo maareynta maareynta shirkaddaada oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u sameyso iibinta iyo iibsashada, raad raac iyo dhisida alaabada, biilka waqtiga iyo maaraynta xiriirada.
Jaantusyada xisaabaadka waxaa ku jira dhammaan faahfaahinta aad u baahan tahay si aad ula socoto meheraddaada, hantidaada, deymaha, sinnaanta, dakhliga iyo kharashyada, iwm. Waxa kale oo ay bixisaa aalado xisaabinta gelitaan labalaab ah oo loo habeeyay loona habeeyay isticmaaleyaasha desktop -ka. Ikhtiyaarka iskaashiga daruuriga ayaa diyaar u ah iibsiga. Qiimeyntu waxay ka bilaabataa $ 499, oo ah liisanka khidmadda hal mar si gooni ah loo iibiyo.
Si sahlan loogu socdo
Waxay bixisaa 30 tijaabo bilaash ah
Waxaa ku jira astaamaha macaamil ganacsi soo noqnoqda
Waxay la socotaa dhammaan hantida iyo deymaha
Qalalaasi aad u sareeya
Ma aha daruur ku salaysan
Is -dhexgal xaddidan iyo qaan -sheegasho
Qalooca barashada toosan
Kani waa software xisaabin ganacsi yar oo loo adeegsado socodsiinta meheraddaada, oo ay ku wada jiraan hal qaansheegasho, xisaabinta, alaabada, CRM iyo kharashyada.
XIDHIIDHKA: Waa maxay Nidaamka Ammaanku sideese u shaqeeyaa?
Waxay la jaanqaadaysaa bangigaaga, waxay soo ceshanaysaa macaamilkaaga waxayna otomaatigaynaysaa 95% macaamilkaaga. Waa xalka xisaabinta gelitaanka labalaabka, wuxuu tirtiraa isku -dhufashada wuxuuna ku siinayaa macluumaad sax ah.
Qiimeyntu waxay ka bilaabataa $ 9/bishii/isticmaale.
Awoodaha wax -soo -saarka ee weyn iyo qiimeynta
Raad -raacyada hogaamiyaasha soo socda waxay marayaan shaqooyinka CRM ee la dhisay
Ma jiraan sifooyin mushahar
Raad -raadin waqti
Ma jiro is -dhexgal app
Kani sidoo kale waa softiweer xisaabeed ku saleysan daruuriga oo bixiya akoonno dhammaystiran oo la bixin karo iyo xallinta otomaatiga caalamiga ah ee meheradaha.
Haddii aad rabto inaad la kulanto macaamil ganacsi kahor waqtiyada kama dambaysta ah, softiweerku wuxuu kaa caawinayaa inaad sidaas samayso mar kasta, laga bilaabo lacag -bixinnada dambe iyo u -hoggaansanaan la'aanta iyo culeyska maamulka.
Software -ka ayaa sidoo kale otomaatig u ah xulashooyinkaaga lacag -bixinta oo hubiya inaad tahay qof u hoggaansan canshuurta. Qiimeynta waxaa lagu bixiyaa iyadoo ku saleysan codsi.
Warbixin iyo falanqayn sahlan
Xulashada lacagta lacag bixinta
Dashboard -ka waa sahlan tahay in la socdo
Taageerada macaamiisha oo xadidan
Is -habeynta hooseysa
Software -kan xisaabinta waxaa loo isticmaalaa qaan -sheegashada, xisaabinta iyo dabagalka waqtiga, waxay ka dhigaysaa maareynta meheraddaada mid fudud oo sahlan.
Waxa kale oo aad heli kartaa astaamaha qaan -sheegashada iyo biilasha sida biilinta baabuurka iyo xusuusinta lacag -bixinta si loo yareeyo shaqada maamulkaaga. Waxaad wanaajin kartaa garaadka tartanka software -ka si aad u gaarto go'aanno ku saleysan dhaqaalahaaga.
Waxaa ka mid ah, qaansheegyada la beddeli karo, lacag -bixinnada moobaylka, qaan -sheegashada iyo lacag -bixinta onlaynka ah, rasiidhada koontada, dabagalka kharashyada, maareynta mushaharka, iwm. Qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa $ 15/bishii.
Akhri Sidoo kale: 15 Software -ka Tafatirka Fiidiyowga Bilaashka ah ee ugu Fiican ee loogu talagalay Android, PC -yada, macruufka, iyo Mac
Waxay leedahay madal xisaabeed dareen leh
Wuxuu ku siinayaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida lacagtaada loo isticmaalay
Waxay taageertaa lacago badan
Ma taageerto Android
Kuma habboona shirkadaha waaweyn
12. La hayo
Kani sidoo kale waa softiweer xisaabin ganacsi yar oo bixiya xisaabinta, qaansheegashada, alaabada, iyo astaamaha CRM oo ay weheliyaan kuwo kale oo badan. Waxay ku siineysaa dhammaan aaladaha loo baahan yahay ee aad u baahan tahay si aad u gaarto go'aanno ganacsi oo wanaagsan.
Waxa kale oo aad xiriirin kartaa bangigaaga, dib -u -heshiisiinta macaamil ganacsi, si otomaatig ah u kala sooc macluumaadka soo gala oo ku maaree buug -yarahaaga. Qiimeyntu waxay ka bilaabataa $ 10/bishii sidoo kale waxaa jira waqti tijaabo oo bilaash ah oo ah 14 maalmood.
Waxay kordhisaa iibintaada
Wuxuu yareeyaa kharashyada
Awoodda isdhexgalka aan xad lahayn
Aan ku habboonayn waddammo badan
Waxaad u heli kartaa softiweerka wixii macluumaad dheeri ah adigoo gujinaya xiriirinta hoose.
Software -ka xisaabinta ganacsiga yar -yar waxaa u baahan milkiilayaasha meheradda si ay u haystaan ​​diiwaan sax ah dhammaan macaamil maaliyadeed.
Waxay u soo bandhigaysaa xogtaada maaliyadeed hab habaysan oo habaysan, waxayna ku siinaysaa faham cad oo ku saabsan xaaladda maaliyadeed ee ganacsigaaga waxayna kaa caawinaysaa inaad samayso go’aamo wanaagsan oo ku aaddan koritaanka iyo horumarinta shirkaddaada.
Waxay kaloo hubisaa in macluumaadka qarsoodiga ah si habboon loo sugo. Waxaad haysaa liistada software -ka xisaabaadka ganacsiga ugu fiican ee aad ka dooran karto badankooduna waa kuwo la awoodi karo oo sahlan in la maro.
Softwares -ka Qiimaha ugu Fiican Bilaash ah 2022
10 Barnaamijyada Lambarka Taleefanka Ganacsiga ee Bilaashka ah 2022 -ka
Milkiile kasta oo ganacsi wuxuu u qalmaa nambarka taleefanka ganacsiga ujeedada ganacsiga kaliya. Tani waxay ku daraysaa heer…
Sida Loo Joojiyo Amaahdaada 2022
Markaad ka fikirto barafow, amaahdu ma noqon karto eraygii ugu horreeyey ee maskaxda ku soo dhaca. Laakiin fahan…
Sida Degdeg Loogu Noqodo Maamule Sare
Fiiro gaar ah u yeelo muran dhex maray laba nin oo dhallinyaro ah oo ku riyoodo inay ganacsiyo waaweyn yeeshaan mar uun.
Sida Loo Xiro Barnaamijyada iPhone 11 Gebi ahaanba | Tan Samee Ilbiriqsiyo
Haddii aad rabto inaad xidho apps-ka iPhone 11, ma heli doontid xorriyadda isticmaalka…